I-aromatherapy ehamba phambili yamafutha e-lavender abalulekile ifektri kawoyela kawoyela ifektri nabakhiqizi | HaiRui
aromatherapy Amafutha e-lavender abalulekile Amafutha wephunga lamafutha
Ukunambitheka Kwemvelo Namakha
I-Daily Flavour, ukunambitheka kokudla, i-Flavour Flavour, Industrial Flavour, Medical, Perfume
Umbala ketshezi olukhanyayo olungenambala
Cishe i-topnot sweet sweet, i-herbaceous entsha
Ayinamanzi emanzini, 95% Ethanol, DPG, DEP, White Oil
ILinalool 30%, iLinalyl acetate 40%, iLavandulyl acetate neLavandulol
I-Steam ekhishwe kusuka eziqongweni zezimbali ezintsha kanye neziqu
1 Net Wt. ka-50KGS / 180KGS ku-gallon GI Drums 2 Logo Designer and Print 3 I-oda elincane le-1kg, 2kg, 5kg e-Alumiunm Bottle
Ubuningi (Amakhilogremu) 1 - 100 101 - 300 301 - 1000 > 1000
Est. Isikhathi (izinsuku) 6 10 15 Kuxoxiswane
I-HaiRui Lavender Amafutha I-Pharma Ibanga le-CAS No. 8000-28-0
Ukubukeka Umbala ketshezi olukhanyayo olungenambala
Amandla adonsela phansi athile
I-Refractive Index 20 ° c 1.459-1.469
I-Flash Point 70 C
Iyancibilika Ayinamanzi emanzini, 95% Ethanol, DPG, DEP, White Oil
Okuqukethwe ILinalool 30%, iLinalyl acetate 40%, iLavandulyl i-acetate neLavandulol
Amafutha eLavender …………………………………………………………………………………………………….
Amafutha e-lavender yi- amafutha abalulekile etholwe ngu ziphuzo zazihluzwa kusuka kuzipikha zezimbali zezinhlobo ezithile ze i-lavender. Amafomu amabili ahlukile, uwoyela wezimbali we-lavender, uwoyela ongenambala, ongancibiliki emanzini, onobuningi be-0.885g / mL; namafutha e-lavender spike, i-distillate evela emthiniLavandula latifolia, Iba nobuningi 0.905g / mL.
Amafutha ezimbali zeLavender igama le- Ifomula kaZwelonke kanye ne- IBritish Pharmacopoeia. Njengawo wonke amafutha abalulekile, akuyona into emsulwakwakwakhe; kuyinhlanganisela eyinkimbinkimbi eyenzeka ngokwemveloamakhemikhali amakhemikhali, kufaka phakathi linalool futhi linalyl acetate.
Amafutha e-Kashmir Lavender adume ngokukhiqizwa kusuka ku-lavender emagqumeni ama-Himalaya. Kusukela ngo-2011, umkhiqizi omkhulu kawoyela we-lavender emhlabeni jikelele nguIBulgaria.
Uwoyela we-lavender, osekuyisikhathi eside usetshenziswa ekwenzeni amakha, ungasetshenziswa naku-aromatherapy. Iphunga linomphumela wokuthula ongasiza ekuphumuleni nasekunciphiseni ukukhathazeka nokucindezeleka. Lasea amaphilisi aqukethe uwoyela we-lavender anenani eliphakeme le-linalool ne-acylyl acetate, okuthiwa Silexan ngumkhiqizi, kuvunywa njenge-anxiolytic eJalimane.Ukuvunyelwa kusekelwe ekutholeni ukuthi ama-capsule afana ngokulingana ne-lorazepam yedosi ephansi.
Sebenzisa komunye umuthi
Ngokusho kwabasekeli bemithi ehlukile, uwoyela we-lavender ungasetshenziswa njengesinqanda magciwane kanye nokunciphisa izinhlungu okusetshenziselwa ukusha okuncane nokulunywa yizinambuzane nezindosi.
Kubuye kuthiwe welapha izifo ezehlukene ezijwayelekile, njengokushiswa yilanga nokuhlaselwa yilanga. Ingasetshenziswa futhi emixubeni kawoyela wokuhlikihla, engasebenza ekuphumuzeni ubuhlungu obuhlangene nobemisipha, noma ezinhlanganisweni zesifuba sokuthambisa ukukhululeka komoya wesifuba somoya kanye ne-bronchitic spasm. Kuthiwa futhi kwelapha izintwala ekhanda uma zisetshenziswa enhlanganisweni yokuhlanza izinwele, noma ekamu elihle ukuqeda izinithi.Olunye ucwaningo luphakamisa ukusetshenziswa kwe-lavender oyili obalulekile esikhundleni se-povidone-iodine yokunakekelwa kwesilonda se-episiotomy.
In vitro, uwoyela we-lavender uyi-cytotoxic kanye ne-photosensitizing. Ucwaningo lukhombisile ukuthi uwoyela we-lavender uyi-cytotoxic kumaseli esikhumba somuntui-in vitro(amaseli endothelial kanye nama-fibroblasts) ekugxileni kwe-0.25%. ILinalool, ingxenye kawoyela we-lavender, ikhombise ukusebenza kwawo wonke uwoyela, okukhombisa ukuthi i-linalool ingaba yingxenye esebenzayo kawoyela we-lavender. Umphumela wolunye ucwaningo ukhombise ukuthi ukukhishwa okunamanzi kunciphise inkomba ye-mitotic, kepha kwafaka ukuphazamiseka kwe-chromosome kanye nokuphazamiseka kwemitotic uma kuqhathaniswa nokulawula, kakhulu. Izicucu ezinamanzi zibange amakhefu, ukunamathela, ukuphambuka kwezigxobo kanye ne-micronuclei. Ngaphezu kwalokho, le miphumela yayihlobene nokukhipha ukugxila.
Kodwa-ke, ngokocwaningo lwango-2005 “yize kwakusanda kubikwa ukuthi uwoyela we-lavender, kanye ne-linalyl acetate yawo enkulu, kunobuthi kumaseli esikhumba somuntu ku-vitro, ukuxhumana nodermatitis namafutha e-lavender kubonakala kwenzeka kuphela ngemvamisa ephansi kakhulu. Kusacacile ukuthi ubuthi baleli vithamini busetshenziswa kanjani ekusetshenzisweni kwesikhumba sikaphalafini kaLavandula. ”
Ngokuphathelene ne-phototoxicity, umbiko ophenyayo wase-2007 ovela kubaphenyi base-Europe wathi, “Amafutha e-lavender nama-sandalwood oyile awazange enze i-photohaemolysis ohlelweni lwethu lokuhlola. Kodwa-ke, kuye kwashicilelwa imibiko embalwa ngokusabela kwe-photosensitivity ngenxa yalezi zinto, isib. Isiguli esisodwa esinokukhanya okuphikelelayo nokuphikiswa kwamafutha e-sandalwood. ”
Uwoyela we-spike lavender ubuye wasetshenziswa kwesinye isikhathi njengesixazululo ekupendweni kukawoyela, ikakhulukazi ngaphambi kokusebenzisa i-turpentine ene-distilled. Isibonelo uFrancisco Pacheco ukhuluma ngokusetshenziswa kukawoyela we-lavender encwadini yakhe ethi “Arte de la pintura”
1. Mini oda 1KG, 2KG, 5KG iyatholakala
2. Isampula mahhala
3. Intengo yokuncintisana kanye nensizakalo enhle kakhulu emva kokuthengisa
4. Intengo ehamba phambili nokuhlinzekwa kwefektri
Langaphambilini Izimonyo Zokunakekela Umzimba Amafutha we-Aloe Vera
I-Lavender Amafutha Abalulekile
Amafutha we-Lavender Iphunga
Amafutha weLavender ahlanzekile
I-China Supplier i-Myrtle Oil ebalulekile
Inani Bulk Isitolo esidayisa yonke impahla Deep Brown Patchouli uwoyela F ...
I-Liquid chlorophyll unicity yezinga lemithi
Uhlobo Lokulima Ngokwemvelo Kanye Nokwemvelo
Ukudla kwe-oyela yemvelo lwesinaphi